Fanatsarana ny voka-bary : Ho avy alohan’ny faran’ny taona ny traktera miisa 1 000 -
AccueilRaharaham-pirenenaFanatsarana ny voka-bary : Ho avy alohan’ny faran’ny taona ny traktera miisa 1 000
Mialohan’ny faran’ity taona ity no hahatongavan’ireo traktera miisa 1 000 ary hiparitaka manerana ny Sampan-draharahan’ny Fambolena eto amintsika. Nandritra ny fihaonan’ny delegasiona Indianina tamin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, omaly teny Iavoloha no nahalalana izany.
Ny minisitry ny Fambolena Rivo Rakotovao no nitarika an’ireto delegasiona Indianina ireto tamin’izany. Tonga nanatrika an’ity fotoana ity ny solontenan’ny orinasa mpamokatra traktera avy amin’ireto delegasiona Indianina ireto.
Hatao izay hahatongavan’io fitaovam-pamokarana io faran’izay haingana eto Madagasikara. Tetikasa efa napetraky ny minisitry ny Fambolena Rivo Rakotovao izy ity, mba ho fanatsarana ny voka-bary. “Tanjona amin’ity tetikasa ity ny hampitomboana ny voka-bary amin’ny alalan’ireto traktera ireto. Eo ihany koa ny hananantsika fahaleovantena ara-tsakafo”, raha ny fanazavana.
Asa ataon’olona miisa100 ao anatin’ny iray andro moa no vitan’ny traktera ao anatin’ny ora iray. Mila fiofanana ihany koa anefa ny tantsaha amin’ny fikirakirana an’itony teknolojia itony ka isan’ny tafiditra tao anatin’ny fihaonan’ireto delegasiona indianina, omaly, ireto ny hametrahana orinasa mpanamboatra traktera sy hanofana an’ireo tantsaha amin’ny fampiasana izany.